Ahoana no ahafantarana fa tena tia marina ny lehilahy iray, ary hafiriana niarahana no tokony hankany an-tranon’ny olon-tiana ?
Tena marina ve fa azon’ny lehilahy fantarina ety ivelany raha mbola virjiny ny vehivavy iray, na tsia ?
Misy faritra potseriny izay eo amin’ny felan-tanana, hono, dia fantany.
Tsy nahalevon-kanina…izao atao
Mangatsiaka ny andro. Mety ho isan’ny manosika ny tsy fahalevonan-kanina izy io. Isan’ny fambaran’io fanelingelenana io moa ny aretin-kibo mahery vaika,
Tena tiako ny vadiko ary tsy te hisaraka aminy aho. 5 taona nivadiana izahay, saingy ny 3 taona tamin’ireo dia nampirafy ahy foana izy.
Naharary ahy ilay izy saingy nihafiako foana. Amin’izao, mihamitombo hatrany ny ditrany, satria misy fotoana, tsy mody izy raha tsy indray mandeha isa-kerinandro. Mbola hihafy ihany ve aho ? Sa inona no tokony ataoko ? Raha hisaraka aho dia ahoana ny amin’ireo zanakay mianadahy ?
Hitako niaraka tamin’olon-kafa anefa izy tamin’ny volana febroary teo ary rehefa nanadihady aho dia fantatro fa efa 4 taona niarahana ry zareo. Nasaiko nisafidy izy, nefa nilaza fa samy tiany izahay roa.
Nisy lehilahy nikôty ahy dia niarahako, vao herinandro izao, fa izaho efa elaela no tia azy.
Nilaza tamiko anefa izy fa efa miaraka amin’olon-kafa. Marary be ny foko, nefa aho tsy te hisaraka aminy, fa tiako ianarana izany mitia amin’ny saina izany.
Leo ny fampirafesana ataon’ny vadiko aho. Mamo lava izy sady tsy manome vola ahy. Te hisaraka aminy aho, nefa izy tsy mety. Tsy haiko ny fomba ialana aminy.
Rehefa mahatsiaro fijaliana tsy azo leferina intsony ianao dia tsy misy olona afaka hitazona anao ao anatin’izany tokantrano tsy ahitana hasambarana izany. Raha mbola tsy tena tapa-kevitra tsara ny hisaraka aminy ianao dia tadidio fa manana ny antsoina hoe :
Covid-19 tao Manarintsoa Isotry : Olona 1 namindra tamin'olona 16!
Nahatratra 16 be izao ireo olona niara-hita fa voan'ny Coronavirus tao Manarintsoa Isotry ny asabotsy lasa teo, araka ny tatitra navoakan'ny mpitondra teny ofisialin'ny CCO, Pr Vololontiana Hanta tamin'io andro io. Olona niserasera sy nifampikasoka tamin'ireo olona voan'ny Coronavirus teo Anatihazo Isotry teo aloha ihany ireo olona 16 vao hita ireo raha ny fanazavany.
Samy manana ny fomba famborahany sy fanehoany fitiavana ny lehilahy. Ao ireo maneho bebe kokoa amin’ny fihetsika izany fitiavany izany, ao kosa ireo izay miteny kokoa fa tsy dia maneho amin’ny fihetsika loatra.
Misy indray ireo izay tsy dia tia mampiseho loatra ny fihetseham-pony, nefa tia ihany izy. Ny tena ahazoana antoka fa tia izy, na manahoana na manao ahoana toetrany, dia ny fanajany anao sy ny fahatokisany anao. Tsy mijery ny anio fotsiny koa izy fa mifampiresaka ny ho avinareo aminao. Mifampitohy amin’izay ihany ny resaka fidirana ao an-trano. Tsy misy fotoana azo faritana, fa arakaraky ny fifandraisan’ny olon-droa sy ny tanjom-piainanareo io. Ny olona manana tanjona ny hivady anefa no tokony tena hifampiditra an-trano, sao mifandany zara fotsiny. Tsy tokony hijery be loatra izay fanaon’ny olona, fa henoy ny fonao dia matokia bebe kokoa ny olona miaraka aminao. Lazao azy fotsiny, raha izay no mampandry ny sainao, fa dingana lehibe ho anao ny fankanesanao any an-tranony sy fankanesany any aminareo, ary tsy tokony ataony ambanin-javatra izany.
Lehilahy aho. Misy vehivavy anankiray izay tena tiako be, nefa aho tiany ohatry ny namana tsotra fotsiny. Mba mangataka torohevitra.
Tsy azo terena io fitiavana io, fa raha toa ka namana no andraisany anao dia izay izany. Anjaranao fotsiny ny misafidy ny hijanona ho namany, na tsia. Raha toa ka ilay voalohany no safidianao, dia aza asiana fanantenana ny amin’ny mety hiarahanareo any aoriana any, satria tsy mbola fantatra izany. Mety hihataka aminao koa izy, raha fantany fa manantena ny fitiavany ianao. Raha tsy vitanao ilay mijanona ho namany dia tena mihataha mihitsy, aza mifanerasera be aminy intsony, saingy aza iadivana kosa izy.
Miaraka amina vehivavy iray izay aho, te hiteraka aminy, saingy tsy mety hiteraka izy raha tsy efa miasa. Izaho anefa efa miha-antitra ihany. Mba toroy hevitra.
Tsy anao irery ny safidy ny hiteraka fa tsy maintsy teny ierana ifanaovanao amin’izay olona heverinao fa tianao hiterahana. Tsy afaka ny hanery azy mihitsy ianao, fa ny mandresy lahatra azy no azonao atao. Tsory aminy fotsiny ny fanirianao, ny tebitebinao noho ny taonanao efa mandroso… Hatreo ihany anefa no azonao atao, satria mila fahavononana be dia be koa izany miteraka izany, indrindra eo amin’ny vehivavy, izay hitondra ilay zaza mandritra ny 9 volana.